လူတစ် ဦး ကိုလွှမ်းမိုးရန် Santa Muerte ၏ဆုတောင်းချက်။
Interpretaciónက de los sueños
နှိပ်ပါ ESC ပိတ်ဖို့ရန်
လူတစ် ဦး ကိုလွှမ်းမိုးရန်သန့်ရှင်းသောသေခြင်း၏ဆုတောင်းချက်
4 Min Min
လူတစ် ဦး ကိုလွှမ်းမိုးရန်သန့်ရှင်းသောသေခြင်း၏ဆုတောင်းချက် ၎င်းကိုမက္ကဆီကိုရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားများမှလာသည့်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သောကြောင့်လူအများစုကကက်သလစ်နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သောဆုတောင်းချက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
သို့သော်၎င်းကိုနတ်ဆိုးစွဲသောပုံသဏ္ဌာန်အဖြစ်ရှုမြင်သော်လည်းအမှန်တရားမှာဤသူတော်စင်သည်လူအများအားကူညီခြင်းနှင့်ခံစားချက်များပါ ၀ င်သည့်ကိစ္စများတွင်အထူးအာဏာရှိခြင်းဖြစ်သည်။
1 Santa Muerte ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာလူကိုလွှမ်းမိုးရန်စန်တာ Muerte ၏ဆုတောင်းချက်?
2 လူတစ် ဦး ကိုလွှမ်းမိုးရန်သန့်ရှင်းသောသေခြင်း၏ဆုတောင်းချက်
2.2 Santa Muerte ကိုဘယ်ကကြီးစိုးနိုင်ဖို့ဆုတောင်းမလဲ။
Santa Muerte ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာလူကိုလွှမ်းမိုးရန်စန်တာ Muerte ၏ဆုတောင်းချက်?
Santa Muerte ကိုလက်တင်အမေရိကရှိမြို့ကြီးများစွာတွင်များစွာသောဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုအဖြစ်ကျင်းပသောမက္ကဆီကိုရှိလူသိများသောယုံကြည်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။
မည်သည့်အရောင်တွင်မဆို ၀ တ်ဆင်နိုင်သောအရိုးစုနှင့်ကိုယ်စားပြုပြီးအများအားဖြင့်အနက်ရောင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ကြောက်ရွံ့ရိုသေသော်လည်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်းသည်ယုံကြည်သူနှင့်ပိုမိုပူးပေါင်းလာသူများကိုအတိအကျဖြစ်စေသည်။
ပျားရည်ကိုလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ မင်းအတွက်ငါခံစားရတယ် ________
____________________ သင့်ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည် __________________ လာပါ။ ငါ့ကိုရှာပါ __________________ ပြီးတော့သင်ရှေ့မှာရှိလိမ့်မည်။ ____________ ငါ့ကိုမင်းရဲ့မေတ္တာအားလုံးကိုပြပါ။
_____________ ငါ့ခြေရာသို့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသမျှအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ။ ည၏ Lady၊ စကြဝuniverseာ၏လွှမ်းမိုးသော Lady နှင့်သူ၏ကမ္ဘာမြေစွမ်းအား ...
စိတ်၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသော __________________ လွှမ်းမိုးသောအမျိုးသမီး၊ ကျွန်ုပ်၏မင်္ဂလာရှိသောသေခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုယူဆောင်လာပါ။
သူ၏ခြေလှမ်းများကျွန်ုပ်ဆီသို့လာပါစေ၊ သူ၏နှလုံးသားသည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါစေ၊ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်ုပ်အားသာလိုအပ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကကျွန်ုပ်သူ့ကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်မြတ်နိုးတော်မူသောတစ်စုံတစ်ရာအားမနှစ်မြို့ပါစေနှင့်။ to _ ____ _____________ မနေပါကကျွန်ုပ်နှင့်အတူမရှိလျှင်မည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမဆိုချဉ်းကပ်ခွင့်မပြုပါနှင့်သူတို့သင့်ထံချဉ်းကပ်ပါကသူတို့ကိုသင့်ဘဝမှလုံးလုံးရန်လိုမှုနှင့်လုံး ၀ ဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်ပါကမင်္ဂလာရှိသောသေခြင်း၊ တန်ခိုးကြီးသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်သာဖြစ်ပါမည်။ ငါမင်းကိုခေါ်သောသူ၏သွေးမှတစ်ဆင့်မီးလောင်သော Myrtle Sap သည်ပျံ့နှံ့နေသည် ____________________ ငါ့ထံသို့လာပါ။ သင်၏နှလုံး၊ သင်၏အတွေးနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဤအခြိနျမှ စ၍ သူတို့သညျအစဉျအမွဲဖွစျ။ အကြှနျုပျကိုဖွစျလိမျ့မညျ။
သေမင်း၏နာမ၌ငါမေး၏။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောအမျိုးသမီးကကျွန်ုပ်ကိုယူဆောင်လာပါ _________________ ကျွန်ုပ်ကိုချစ်သောကြောင့်အရက်မူးသည်။
ငါ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသရန်နှင့်ပြသရန်ငါ့အပင်များကိုအပ်နှံခဲ့သည် ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဘယ်လိုခံစားရလဲ။ စကြဝuniverseာ၏အထူထပ်ဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးစွမ်းအင်များကိုရွေ့လျားစေသောသင်တို့၏ Santissima Muerte ကွေးသည် ________________ ။ ၎င်းကို၎င်းကို၎င်းကို၎င်းနှင့်မည်သည့်နေရာမှယူဆောင်လာရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်။ ၎င်းသည်အမှောင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်လျှင်အမြဲတမ်း A _______________ ကိုငါ့ရှေ့တွင် ထား၍ သူမ၏လမ်းကြောင်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကူးပါစေ။
Santísima Muerte သန်းတစ်ထောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မင်းသန်းတစ်ရာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားငါ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါ၊ ငါ့ကိုချစ်မြတ်နိုးပါကမင်းရဲ့မြင်းကငါ့ရှေ့မှာရှေ့ကိုယူလာပေးပါ။ မင်းရဲ့လှံကိုငါ့ဆီသို့ ဦး တည်စေပါလိမ့်မယ် Mighty Lady ကငါ့ကိုအနံ့ခံသူနှင့်မတူရင်တောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ , ငါသတိရ, ငါပစ္စုပ္ပန်ခံစားရကြောင်း ...
သူနှင့်အတူရှိနေပြီးညနေရာ၏အမေဖြစ်သူနေ့၏နေ့ခင်းဘက်ဖြစ်ပါစေ _________________ ၏ ၀ ိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအမြဲရှိနေစေပါ။
သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုသာချစ်ကြောင်း၊ သူသည်ကျွန်ုပ်၏မင်္ဂလာရှိသောသေခြင်း၏မျက်လုံးများတွင်သာရှိသည် _____________________
ကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာထံသို့ _______________ ၏ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ထံသို့ကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါ။ ညအချိန်တွင်သင်နှင့်အတူရှိပါလိမ့်မည် ကျေးဇူးပြု၍ Santissima Muerte Santissima Muerte ၏နာမ၌ကျွန်ုပ်အားပေးပါ အင်အား, နှလုံးသား…
ထိုအခါဒိုမိန်းစုစုပေါင်း __________________ Santísima Muerte ငါသည်သင်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်တောင်းပန်သည်။ မင်းတောင်းပန်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။ မင်းကိုမင်းဆန်လီဆာ Muerte လို့ခေါ်တယ်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်မထားပါနဲ့ ...
ခက်ခဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ဒီ Santa Muerte တောင်ပံ အဲဒါကြီးပေမယ့်အားကောင်းတယ်.
၎င်းသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မည့်အရာတစ်ခုကိုတောင်းရန်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီနှင့် ဆုတောင်းချက်အားလုံး သူတို့ကတကယ်အစွမ်းထက်တယ်၊ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့တဲ့အခါသင်လုပ်နိုင်တယ်။
Santa Muerte ကိုဘယ်ကကြီးစိုးနိုင်ဖို့ဆုတောင်းမလဲ။
လူအများစုကမကောင်းသောစွမ်းအင်များသည်ဆုတောင်းခြင်း၏ညွှန်ကြားချက်ကိုမလွှမ်းမိုးစေဘဲတစ် ဦး တည်းနေခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လူတစ် ဦး ကိုလွှမ်းမိုးရန်သန့်ရှင်းသောသေခြင်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာပါ။
Santa Muerte ထံဆုတောင်းပါ။ ချစ်ရသူပြန်လာပါစေ
ဇူလိုင်လ 13, 2020
လူနှစ် ဦး ခွဲခြားရန်ဆုတောင်းခြင်း
ဇူလိုင်လ 10, 2020
ဇူလိုင်လ 9, 2020
San Alejo သို့ဆုတောင်းခြင်း
ဇူလိုင်လ 12, 2020
ဇူလိုင်လ 11, 2020
စိန့် Cyprian သို့ဆုတောင်းခြင်း
San Marcos de Leónထံဆုတောင်းပါ
ဇူလိုင်လ 8, 2020
Santa Barbara သို့ဆုတောင်းပါ
ဇူလိုင်လ 7, 2020
ဇူလိုင်လ 6, 2020
ဇူလိုင်လ 5, 2020
ဇူလိုင်လ 4, 2020
ဇူလိုင်လ 3, 2020
ဇူလိုင်လ 2, 2020
ဇွန်လ 30, 2020
ဇွန်လ 29, 2020
ဇွန်လ 28, 2020
San Ramón Nonato ဆုတောင်းခြင်း
ဇွန်လ 27, 2020
ဇွန်လ 26, 2020
Saint Charbel ထံဆုတောင်းပါ
ဇွန်လ 25, 2020
ဇွန်လ 24, 2020
ဇွန်လ 23, 2020
ကက်သလစ်လူငယ်များအတွက် 14 ကျမ်းစာအခန်းငယ်များ
ဇွန်လ 22, 2020
ဇွန်လ 21, 2020
ဇွန်လ 20, 2020
Loyola ၏စိန့် Ignatius ၏ဆုတောင်းချက်
ဇွန်လ 19, 2020
ဇွန်လ 18, 2020
ဇွန်လ 17, 2020
ဇွန်လ 16, 2020
ဇွန်လ 15, 2020
San Antonio တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရရန်ဆုတောင်းပါ
ဇွန်လ 14, 2020
ဇွန်လ 13, 2020
ဇွန်လ 12, 2020
လာလာသော San Marcos de Leónထံဆုတောင်းပါ
ဇွန်လ 10, 2020
ဇွန်လ 9, 2020
အလုပ်အတွက် Santa Muerte ထံဆုတောင်းပါ
ဇွန်လ 8, 2020
စိန့်မာတင်၏ Porres ၏ဆုတောင်းပဌနာ
ဇွန်လ 7, 2020
ဇွန်လ 6, 2020
ဇွန်လ 5, 2020
ဇွန်လ 4, 2020
ဇွန်လ 3, 2020
ဇွန်လ 2, 2020
ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လာရန်တစ် ဦး တည်းဝိညာဉျကိုဆုတောင်းပဌနာ
ဇွန်လ 1, 2020
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Montserrat ၏အပျိုကညာထံဆုတောင်းပါ
မေလ 31, 2020
မေလ 30, 2020
မေလ 29, 2020
San Roque သို့ဆုတောင်းခြင်း
မေလ 28, 2020
မေလ 27, 2020
မေလ 26, 2020
မေလ 25, 2020
မေလ 24, 2020
အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ရန်3အစွမ်းထက်သောဆုတောင်းချက်များ
မေလ 22, 2020
အလွန်ခက်ခဲပြီးအပူတပြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် St. Jude Thaddeus ထံဆုတောင်းပါ
မေလ 21, 2020
မေလ 19, 2020
မေလ 18, 2020
မေလ 17, 2020
မေလ 16, 2020
မေလ 15, 2020
ချစ်ခြင်းမေတ္တာလား ခင်မင်မှုလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
နိုဝင်ဘာလ 24, 2021
မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
လူတွေနဲ့ ပိုပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
နိုဝင်ဘာလ 23, 2021
အစားအစာများ သင်ကြား ဝိတ်ကျ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ ယစ်မူးသည် သမ်မာကမျြး ကောင်းပြီ ဘယ်လို ဒိုင်လူကြီး အမျိုးမျိုးသော အဆုံး စာပိုဒ်တိုများ Interpretaciónက de los sueños ဒဏ္.ာရီ သင်္ချာအတတ်ပညာ ဆုတောင်းချက်များ လူကြိုက်များ ဆန်းတို့စ အမျိုးအစား အိပ်မက်များ ဆှဲငငျ Tarot Whatsapp